Ny Sucrose dia mitentina 65-70% amin'ny famokarana siramamy manerantany. Ny fizotry ny famokarana dia mila etona sy herinaratra betsaka, ary mamokatra residue maro amin'ny dingana samihafa amin'ny famokarana amin'ny amin'ny fotoana mitovy.
Ny toeran'ny famokarana Sucrose eto amin'izao tontolo izao
Misy firenena zato mahery manerana izao tontolo izao izay mamokatra sukrosa. Brezila, India, Thailand ary Australia no mpamokatra siramamy lehibe manerantany. Ny famokarana siramamy novokarin'ireto firenena ireto dia mitentina manodidina ny 46% amin'ny vokatra manerantany ary ny habetsaky ny fanondranana siramamy dia manodidina ny 80% amin'ny fanondranana manerantany. Ny famokarana siramamy Breziliana ary ny laharam-pahamehana amin'ny fanondranana dia manerantany voalohany, manisa 22% ny famokarana manerantany isan-taona ny sucrose ary 60% amin'ny fanondranana manerantany.
Vokatra by siramamy / fary sy ny fitambarana
Amin'ny fizotry ny fanodinana fary, afa-tsy ireo vokatra lehibe toy ny siramamy fotsy sy ny siramamy volontsôkôla, dia misy vokatra telo lehibe: bagasse fary, fotaka press, ary molotra blackstrap.
Ny Bagasse dia ny residu fibrous avy amin'ny fary aorian'ny fitrandrahana ny ranom-pary. Ny bagasse fary dia azo ampiasaina amin'ny famokarana zezika organika. Na izany aza, satria bagasse dia cellulose saika madio ary tsy misy otrikaina dia tsy zezika azo ampiasaina, ilaina indrindra ny fanampiana otrikaina hafa, indrindra ny akora misy azota, toy ny fitaovana maitso, tain'omby, tain-kisoa sns., Hanaovana ireo lo.
◇Fototra fanaovana pirinty siramamy:
Ny fotaka fanerena, sisa tavela lehibe amin'ny famokarana siramamy, dia ny sisa tavela amin'ny fitsaboana ranom-pary amin'ny filtration, mitaky ny 2% amin'ny lanjan'ny fary voapotsitra. Antsoina koa hoe fotaka fanivanana fary, fotaka fanerena fary, fotaka masiaka fary, mofomamy misy fary, fotaka sivana fary.
Ny mofomamy sivana (fotaka) dia miteraka fandotoana lehibe, ary amin'ny ozinina siramamy marobe dia heverina ho fako io, miteraka olana amin'ny fitantanana sy ny fanariana farany. Mandoto ny rivotra sy ny rano ambanin'ny tany izy io raha manangona fotaka tsy manara-penitra. Noho izany, ny fitsaboana ny fotaka dia ny olana maika amin'ny sampan-draharaha misahana ny fitrandrahana fary sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fampiharana fotaka fanivanana
Raha ny tena izy, noho ny fananana singa biolojika sy singa mineraly ilaina amin'ny fihinanan'ny zavamaniry, ny mofomamy fanivanana dia efa nampiasaina ho zezika any amin'ny firenena maro, ao anatin'izany i Brezila, India, Aostralia, Kiobà, Pakistan, Taiwan, Afrika Atsimo ary Arzantina. Nampiasaina ho solony feno na ampahany amin'ny zezika mineraly amin'ny fambolena fary, ary amin'ny fambolena vokatra hafa.
Sarobidy amin'ny sivana an-gazety amin'ny sivana amin'ny maha-zezika ny zezika
Ny tahan'ny vokatra siramamy sy ny fotaka sivana (atin'ny rano 65%) dia manodidina ny 10: 3, izany hoe ny famoahana siramamy 10 taonina dia afaka mamokatra fotaka sivana maina 1 taonina. Tamin'ny 2015, 0,172 miliara taonina ny famokarana siramamy manerantany, miaraka amin'ny 75% amin'ny famokarana eran-tany i Brezila, India ary Sina. Tombanana ho 5.2 tapitrisa taonina ny fotaka famokarana mpamokatra any India isan-taona.
Alohan'ny hahalalana ny fomba fitantanana ny tontolo iainana hitantanana fotaka fanaovan-tsivily na mofomamy fanaovan-gazety, andao jerena misimisy kokoa ny momba azy mba hahitana vahaolana azo tanterahana tsy ho ela!
Toetra ara-batana sy singa simika an'ny fotaka Sugarcane Press:
Solida miovaova tanteraka
BOD (5 andro amin'ny 27 ° C)
Wax sy tavy
Raha jerena avy etsy ambony, ny fotaka fanontam-pirinty dia misy otrikaina biolojika sy mineraly marobe, ankoatry ny 20-25% ny gazy karbonika. Ny fotaka fanontam-pirinty dia manan-karena ihany koa amin'ny potasioma, sôdiôma ary phosforus. Loharano phosoreo sy organika be dia be izy io ary misy atiny hamandoana lehibe, izay mahatonga azy io ho zezika zezika compost sarobidy! Ny fampiasana mahazatra dia ny zezika, na amin'ny endrika tsy voavolavola na voahodina. Fomba ampiasaina hanatsarana ny sandan'ny zezika
ampidirina ao ny composting, ny fitsaboana amin'ny zavamiaina bitika ary ny fampifangaroana ireo zavamaniry fanadiovana
Molasses dia vokatra azo avy amin'ny siramamy 'C' mandritra ny fanamafisana ny kristaly siramamy. Ny vokatra molatra isaky ny tonina dia ao anatin'ny 4 ka hatramin'ny 4,5%. Halefa any ivelan'ny orinasa izy io ho toy ny vokatra fako.
Na izany aza, ny molotra dia loharanon-kery haingana sy haingana ho an'ny karazan-mikraoba sy fiainana an-tany isan-karazany ao anaty antontam-bokatra na tany. Molasses dia manana karbaona 27: 1 ka hatramin'ny azota ary misy karbaona mety levona 21% eo ho eo. Indraindray izy io dia ampiasaina amin'ny fanaovan-tsakafo na hamokarana éthanol, ho fangaro amin'ny sakafon'ny omby, ary ho zezika "miorina amin'ny molatra".
Ny isan-jaton'ny otrikaina misy ao amin'ny Molasses
Glucose sy Fructose
Kalsioma sy potasioma
Fomba fanamboarana zezika zezika vovo-totozy sivana & molotra
Voalohany ny fotaka fanerena siramamy (87.8%), kojakoja karbonika (9,5%) toy ny vovoka ahitra, vovo-mololo, vavonin-kena, bozaka varimbazaha, katsaka, savoka sns, molas (0,5%), fosfat tokana (2.0%) fotaka solifara (0,2%), nafangaro tsara ary nopongarina tokony ho 20m ny halavany ambonin'ny tany, 2.3-2.5m ny sakany ary 5.6m ny haavon'ny boribory semicircle. (toro-hevitra: ny haben'ny haavon'ny rivotra dia tokony hifanaraka amin'ny ny angona parameter an'ny turner compost ampiasainao)
Ireo fantsona ireo dia nomena fotoana natambatra sy namita ny fizotran'ny fandevonan-kanina nandritra ny 14-21 andro. Mandritra ny fametahana azy, ny fangaro dia afangaro, avadika ary aondrana rano isaky ny telo andro mba hitazomana ny hamandoana 50-60%. Ny compost turner dia nampiasaina hanodinana ny fizotrany mba hitazomana ny fitoviana sy ny fifangaroana. (toro-hevitra: ny zezika mpamaky zezika manampy ny mpamokatra zezika afangaro sy ahodina haingana ny zezika, mahomby sy ilaina amin'ny tsipika famokarana zezika organika)
Fampitandremana amin'ny fermentation
Raha avo loatra ny atin'ny hamandoana dia hitatra ny fotoana fanamasinana. Ny fihenan'ny rano ao anaty fotaka dia mety miteraka fivontosana tsy feno. Ahoana no hitsarana raha matotra ny zezika? Ny zezika matotra dia miavaka amin'ny endrika malalaka, loko volondavenona (namboarina ho taupe) ary tsy misy fofona. Misy ny mari-pana mitohy eo anelanelan'ny zezika sy ny manodidina azy. Ny haavon'ny hamandoan'ny compost dia latsaky ny 20%.
Avy eo alefa any amin'ny Granulator zezika biolojika vaovao ho an'ny fananganana granules.
◇Fanamainana / Fampangatsiahana
Halefa any amin'ny Masinina fanamainana amponga Rotary, eto molasety (0,5% amin'ny akora manta rehetra) sy rano dia tokony hofafazana alohan'ny hidirany ao amin'ilay fanamainana. Ny fanamainana amponga rotary, mampiasa teknolojia ara-batana mba hamainina granules, dia ampiasaina hamorona granules amin'ny hafanan'ny 240-250 ℃ ary hampihenana ny atin'ny hamandoana ho 10%.
Aorian'ny famoahana ny zezika, alefa any milina efijery amponga Rotary. Ny haben'ny salan'isan'ny zezika biolojika dia tokony hanana savaivony 5mm hanamorana ny tantsaha sy ny granule tsara kalitao. Ny granules mihoampampana sy ambany dia averina ampiasaina indray ho an'ny singa granulation.
Ny vokatra amin'ny habe takiana dia alefa any milina fonosana mandeha ho azy, izay amboarina ao anaty kitapo amin'ny alàlan'ny famenoana ho azy. Ary avy eo ny vokatra dia alefa any amin'ny faritra samihafa amidy.
Fomban-tsolika manivana siramamy sy fotaka moka
1. Fanoherana ny aretina avo lenta ary kely ny tsimparifary:
Mandritra ny fitsaboana fotaka fanivanana siramamy, ny zavamiaina bitika dia mihombo haingana ary mamokatra antibiotika, hormonina ary metabolita manokana. Ny fametrahana zezika amin'ny tany dia afaka manakana ny fihanaky ny valanaretina sy ny fitomboan'ny ahidratsy, manatsara ny fanoherana ny bibikely sy ny aretina. Ny fotaka sivana lena tsy misy fitsaboana dia mora ny mampita ny bakteria, ny voa sy ny atody ahitra amin'ny voly ary misy fiantraikany amin'ny fitomboany).
2. Fahombiazan'ny zezika avo:
Satria ny fementation dia 7-15 andro fotsiny, dia mitazona ny otrikaina feno fotaka araka izay azo atao. Noho ny fahalimban'ny zavamiaina bitika dia manova ireo fitaovana sarotra raisina ho lasa otrikaina mahomby izy io. Ny zezika biolojika maloto sivana dia afaka milalao haingana amin'ny zezika ary mameno ny otrikaina ilaina amin'ny fitomboan'ny voly. Noho izany, ny fahombiazan'ny zezika dia mitazona mandritra ny fotoana maharitra.
3. Fambolena ny tany mahavokatra sy fanatsarana ny tany:
Ny fampiasana zezika simika tokana mandritra ny fotoana maharitra, ny zavatra biolojika amin'ny tany dia lanina tsikelikely, izay miteraka isan'ny fihenan'ny mikraoba mahasoa. Amin'izany fomba izany, mihena ny atin'ny anzima ary simba ny kôlôdidà, miteraka fihenan'ny tany, fanamasinana ary fanamasinana. Ny zezika biolojika vita amin'ny fotaka dia afaka manambatra ny fasika, tanimanga malalaka, manakana ny otrikaretina, mamerina amin'ny laoniny ny tontolo iainana biolojika, manatsara ny fitrandrahana ny tany ary manatsara ny fahaizana mitazona rano sy otrikaina
4. Fanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra:
Aorian'ny fampiharana zezika biolojika, ny voly dia manana rafitra fakan-kazo sy tady ravina mahery, izay mampiroborobo ny fambolena, ny fitomboana, ny voninkazo, ny voankazo ary ny fahamatorana. Manatsara be ny endrika sy ny lokon'ny vokatra fambolena, mampitombo ny fary sy ny hamamin'ny voankazo. Ny zezika biolojika biolojika sivana dia ampiasaina amin'ny fitafiana ankapobeny sy ambony. Amin'ny vanim-potoana mihombo dia manosotra zezika anorganika kely. Izy io dia afaka mamaly ny filan'ny fitomboan'ny vokatra ary mahatratra ny tanjona hitantanana sy hampiasa ny tany.
5. Fampiharana midadasika amin'ny fambolena
Ampiasaina ho zezika ifotony sy pataloha ho an'ny fary, akondro, hazo fihinam-boa, melon, legioma, zavamaniry dite, voninkazo, ovy, paraky, fambolena sns.